Waa maxay nuxurka warbixinta ay ka carrootay DF ee kasoo baxday Midowga Afrika? | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Waa maxay nuxurka warbixinta ay ka carrootay DF ee kasoo baxday Midowga...
Waa maxay nuxurka warbixinta ay ka carrootay DF ee kasoo baxday Midowga Afrika?
(Hadalsame) 18 Luulyo 2021 – Dowladda Soomaaliya ayaa ku gacan sayrtay war bixin lagu faafiyay baraha bulshada oo la sheegay in ay kasoo baxday Guddiga Qiimaynta Madaxa Bannaan ee Midowga Afrika, taasoo looga hadlay arrimo ku saabsan howlgalka AMISOM iyo xaaladda Soomaaliya.
Previous article“Ma jiri doonto waan waan dambe!” – RW Itoobiya oo dagaal hor leh iclaamiyey
Next articleCiidamada DF iyo kuwa Galmudug oo qabsaday magaalo kale oo istaraatiji ah